File:Counter-Strike Global Offensive.jpg
Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) waa ciyaar fiidiyoow-qof-toogasho ah oo fiidiyoow ah oo fiidiyoow ah oo ay soo saareen Valve iyo Hidden Path Entertainment. Waa ciyaartii afaraad ee taxanaha 'Counter-Strike' waxaana loo sii daayay Windows, OS X, Xbox 360, iyo PlayStation 3 bishii Ogosto 2012, halka nooca Linux-ka la sii daayay 2014.
Ciyaarta ayaa waxaa iska hor imanaya laba kooxood oo kala ah: Argagixisada iyo La-Dagaalanka Argagixisada. Labada dhinacba waxaa loo xilsaaray inay meesha ka saaraan kan kale iyagoo waliba dhameystiraya ujeeddooyin gooni ah. Argagixisadu, waxay kuxirantahay qaabka ciyaarta, waa inay ama aasaan bamka ama difaacaan la heystayaasha, halka La Dagaalanka Argagixisada ay tahay inay sidoo kale ka hortagaan in bamka la dhigo, dajiyo bamka, ama badbaadiyaan la heystayaasha. Waxaa jira sagaal hababka ciyaarta, oo dhammaantood leh astaamo gaar ah oo u gaar ah habkaas. Ciyaarta ayaa sidoo kale leh taageero isku mid ah oo u oggolaaneysa ciyaartoydu inay ku ciyaaraan server-yada loo yaqaan 'Valve server', iyo sidoo kale u oggolaanaya xubnaha bulshada inay martigeliyaan adeegyadooda iyaga oo wata khariidado gaar ah iyo qaababka ciyaarta. Qaab ciyaareed dagaal-royale ah, "Aag Khatar ah", ayaa la soo saaray 2018.
Global Offensive waxay heshay dib u eegis togan oo ay ka heleen dhaleeceeyayaasha markii la siidaayay, kuwaas oo ku amaanay ciyaarteeda iyo sida ay ugu daacadsan tahay kuwii ka horeeyay, in kasta oo lagu dhaliilay qaar ka mid ah astaamaheedii hore waxaana lagu xusay kala duwanaanshaha u dhexeeya qunsuliyada iyo noocyada PC-ga. Tan iyo markii la sii daayay, waxay soo jiitay qiyaastii 11 milyan oo ciyaartoy bishii, waxayna soo aruurisay muuqaal firfircoon oo tartan ah, tartamo badan oo ay maalgaliso kooxda Valve lafteeda. Bishii Diseembar 2018, Valve wuxuu ciyaarta u beddelay qaab bilaash ah oo lagu ciyaaro, isagoo diiradda saaraya dakhliga ka soo baxa waxyaabaha la isku qurxiyo.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Counter-Strike:_Global_Offensive&oldid=207063"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 Nofeembar 2020, marka ee eheed 09:20.